Faka i-emulator ye-PS1-Reloaded kwi-Ubuntu | Ubunlog
I-PCSX-iphinda ilayishwe kwakhona
I-PCSX-iphinda ilayishwe kwakhona Yindlela yokulinganisa enomnqamlezo yeqonga lePlayStation 1 esinokonwabela ngayo ikhompyuter yethu. Ngokungafaniyo nabanye emulators onokuyifumana kumnatha, iPCSX ujongano olulula nolunomdla.
Ukuba ngale ndlela lukhetho olufanelekileyo lokunandipha imidlalo yethu kwinduduzo yekhompyuter yethu. Le enomzami wokulungisa inenguqulo yayo yePS1 BIOSKe ngoko, ezinye zeempawu aziyi kusebenza kuwe. Umzekelo kukwazi ukusebenzisa iimemori khadi.
Esi kuphela kwesiphene, ke ukuba ufuna ukonwabela zonke izibonelelo zalesi sisombululo kuya kufuneka ufumane i-BIOS yePS1 kwinethiwekhi, ngenxa yezizathu zomthetho andinakukuxelela ukuba kanjani, kodwa ukwenza uphando oluncinci ungayifumana kwinethiwekhi nakwingqondo yakho.
1 Uyifaka njani iPCSX-iphinda ilayishwe ku-Ubuntu
1.1 Khuphela kwaye uqokelele iPCSX-iphinda ilayishwe kwakhona kwikhowudi yomthombo
2 Uyicwangcisa njani iPCSX-Reloaded
Uyifaka njani iPCSX-iphinda ilayishwe ku-Ubuntu
Ukuba ungumsebenzisi wenguqulelo yangoku ye-Ubuntu okanye yeenguqulelo zangaphambili ukuya kuthi ga kwi-16.04, unokwenza ufakelo ngokuthe ngqo kwiindawo zokugcina ezisemthethweni zeBuntu. Le nkqubo ikwasebenza ngokuhanjiswa okusekwe kubuntu.
Khuphela kwaye uqokelele iPCSX-iphinda ilayishwe kwakhona kwikhowudi yomthombo
Ukuba ngesizathu esithile awuyifumani iphakheji ye-PCSX kwindawo yokugcina izinto, uya kuyenza unokukhuphela i-emulator kusuka kwesi sixhobo.
Kufuneka nje siqiniseke unokuxhomekeka okuyimfuneko ukuze ungabinangxaki ngexesha lokwenziwa kwenkqubo.
Sifaka ukuxhomekeka nge:
Ngoku siqhubeka kuphela nokukhupha ifayile kwaye ukusuka kwisiphelo sendlela sizibeka kwifolda eseleyo. Ukufaka inkqubo kwinkqubo yethu.
Uyicwangcisa njani iPCSX-Reloaded
Nje ukuba ukufakelwa kwesiphelo kwenkqubo kugqityiwe, sikhangela kwaye siphumelele kwimenyu yenkqubo yethu. Into yokuqala iya kuba kukumisela i-emulator ngokwenkqubo yethu. Singayenza kunxibelelwano lomzobo we-emulator kwimenyu yokukhetha Uqwalaselo-> Iiplagi kunye neBIOS.
Apha sinokwenza uhlengahlengiso esinokulufuna, ekutshintsheni uguqulelo lomqhubi wevidiyo, iiplagi zesandi, uhlengahlengiso lweendlela zokudlala, iipads kunye / okanye iimephu eziphambili.
Kulo Ukhetho lwemidlalo, Senza ukulungisa imephu eziphambili Kuxhomekeke kukhetho lwethu, ungashiya useto olungagqibekanga lwabalawuli bePS1 okanye ulungelelanise kwakhona ukulungelwa kwakho.
Kukhetho lwe-BIOS, kulapho unokutshintsha khona i-BIOS apho i-emulator iyakusebenza khona, njengoko benditshilo ngaphambili, i-emulator izisa eyayo i-BIOS ngokungagqibekanga, kodwa kolu khetho sinokuzama ezinye ezisemnatheni.
Ugqibile useto yedwa Sinqakraza Vala ukuze basindiswe.
Okokugqibela, ukuqhuba umdlalo kwimenyu yokhetho kwi "Ifayile", silayisha ifayile ukuqala ukonwabela isihloko sethu esizithandayo.
I-PCSX isinika ithuba lokuqhuba izihloko zethu ngeendlela ezahlukeneyo ezinje:
Ukusuka ekuphunyezweni komdlalo.
Ukusuka kwi-CD yoqobo
Ukusuka kwifayile ye-ISO, ibin, img, mdf.
Okokugqibela, ukuba ngexesha lomdlalo kufuneka siyigcine, sinezinto ezimbini onokukhetha kuzo:
Eyokuqala yeyakudala esibonelelwa ngumdlalo ngqo, ukuyigcina kwimemori khadi.
Okwesibini, kunikezelwa ngumzami we-emulator esivumela ukuba sigcine umdlalo, apho ukhona, ngokungathi umdlalo wawukhenkcekile kwaye unethuba lokuwuqala kwakhona, ngokungathi besimile kancinci.
Senza oku ngokucinezela isitshixo se-ESC emva koko uye kwimenyu Emulator-> Gcina ilizwe. Ukuqhubeka nomdlalo kwi Emulator-> Umthwalo weSizwe.
I-PCSX-Reloaded ayithandabuzeki ukuba yinto elungileyo malunga nokuzonwabisa kunye nemidlalo ukusuka kwi-90s ukuya kwi-2000s.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Faka i-emulator ye-PS1-Reloaded kwi-Ubuntu
U-Emmanuel Peto Gutierrez udlala uharry potter 1
UEmmanuel Peto Gutierrez sitsho
Kubi akukho mpendulo "iyandijika"
Phendula uEmmanuel Peto Gutierrez
UEmmanuel Peto Gutierrez wandiqala
ULeonhard Suarez sitsho
Kodwa ngaba kufuneka ukufaka iwayini?
Phendula uLeonhard Suárez
U-ERick Araya sitsho
I-GUYS, usetyenziso xa unyusa umdlalo, luhamba mnyama kwaye isicelo siyavalwa. Ndingenza ntoni ??? Ndifuna ukudlala ingxaki yedino 2.
Phendula u-ERick Araya
USilvio Curbelo Calosso sitsho
Ukuba ndiyinto ye-mongolian shit
Phendula uSilvio Curbelo Calosso
munca incanca yam
Faka abaqhubi beNvidia kwi-Ubuntu 17.04
Inguqulelo entsha yeAtom 1.18 idibanisa iGit kunye neGithub